It is me. Ko Niknayman.: နစ်နေမန်းထံ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။
ပြည်သူလှုပ်ရှားမှု ၂၀၀၈ နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များပေးပို့ နိုင်ရန်အတွက် နစ်နေမန်းထံ အောက်ပါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ် - 1 (310) 773 5592
(မှတ်ချက်။ ။ နစ်နေမန်းအား ဒီဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် စိတ်ချစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိမိပြောလိုသော စကားများအား answering machine (သို့ ) voice mail box တွင် ပြောကြားထားခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဒီဖုန်းနံပါတ်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ ပိုင် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံမှနေ ခေါ်လျှင် ပြင်ပနိုင်ငံသို့ ခေါ်သည့် နိုင်ငံအထွက် နိုင်ငံအထွက်နံပါတ်အရင်နှိပ်ရန်လိုပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားပြောခ ဖုန်းခကျခံရပါမည်။
ဒီဖုန်းနံပါတ်သည် နစ်နေမန်းနေထိုင်ရာဒေသ၏ နံပါတ်မဟုတ်သော်လည်း နစ်နေမန်းအပိုင် ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် နစ်နေမန်းအနေဖြင့် ခေါ်လာသောဖုန်းတိုင်းအား ပြန်လည်မဖြေကြားနိုင်မှုအား နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။ အမိမြန်မာပြည်နှင့် ပြည်သူများ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက် ဒီဖုန်းနံပါတ်အား ပံ့ပိုးကူညီပေးသော ပြင်ပနိုင်ငံများမှ မိတ်ဆွေများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာပြည်သတင်းများအား ပေးပို့ လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်)။
အထူးသတိပေးချက်။ ။ ဖုန်းဆက်ရာတွင် နအဖထောက်လှမ်းရေးများမှ ကြားဖြတ်နားထောင်နိုင်ပါသောကြောင့် မိမိတို့ ၏ နာမည်ရင်းများ မပြောကြားရန်၊ မိမိတို့ နေထိုင်ရာဒေသများ၊ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းများဖြင့် မဆက်ရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။
အီးမေးလ် - niknayman@gmail.com
Posted by Ko Niknayman at 11:18 PM